Aza manana andriamani-kafa
"Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany." - Eks. 20:3
Tsy misy fitsipika ara-moraly voambara ao amin'ny Baiboly ka tsy nosoratan'ny rantsan-tanan'Andriamanitra ao amin'ny lalàny masina teo amin'ny vatofisaka roa. Nomena dika mitovy amin' izany i Mosesy teny an-tendrombohitra Sinay. Ny didy efatra voalohany dia mandidy ny olona mba hanompoany an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, sy ny fanahiny rehetra, sy ny sainy rehetra, ary ny heriny rehetra. Mahafaoka ny maha-olona manontolo izany. Mitaky fitiavana miredareda sy lalina tokoa izany, ka tsy hisy zavatra azon'ny olona ankamamiana ao an-tsainy sy ny fony izay handrafy an'Andriamanitra. Ny asany koa dia hitondra ny mariky ny lanitra. Tsy hisy zavatra hanan-toerana ambony noho ny voninahitr'Andriamanitra. Ilay Raintsika any an-danitra no tokony hotiavintsika mandrakariva amin'ny maha-voalohany Azy, amin'ny maha-fifaliana sy fahombiazana Azy, amin'ny maha-fahazavana sy mpiantoka ny fiainantsika Azy, ary amin'ny maha-anjarantsika mandrakizay Azy. — L, 15, 1895
Aoka ny olona hiankohoka amin'Andriamanitra sy hanompo Azy, ary Izy irery ihany. Aoka tsy hasandratra sy hotompoina toy ny Andriamanitra ny avonavona sy ny fitiavan-tena. Aoka tsy hatao Andriamanitra ny vola. Ny filana ambany no hanapaka ny fiainana raha tsy fehezin'ny hery ambony indrindran'ny saina ny fitiavam-pahafinaretana. Sampy misolo toerana an'i Jehôvah ny zavatra rehetra ifantohana sy hindrahindraina loatra ka maharevo loatra ny saina. — Ms, 126, 1901
Jehôvah, ilay mandrakizay, ilay Izy, ilay tsy nohariana, ilay Loharanon'ny zavatra rehetra sy mihazona ny zavatra rehetra, no hany mendrika ny fanajantsika ambony indrindra sy ny fanompoantsika. Rarana ny olombelona tsy' hanome ny toerana voalohany eo amin'ny fitiavany sy ny fanompoany ho an'ny zavatra iray, fa ho an'Andriamanitra irery ihany. Na inona na inona zavatra ankamamiana ka mampihena ny fitiavantsika an'Andriamanitra na manohintohina ny fanompoana tokony hataontsika Aminy, dia tonga sampintsika izany. — PP, 305.